Arbaco, Jun 17, 2020-Qodobo Hordhac ah oo kasoo baxay shirkii Guddiyada Farsamo ee Wadda Hadalada Somaliland iyo Soomaaliya – LaacibOnline
Arbaco, Jun 17, 2020-Qodobo Hordhac ah oo kasoo baxay shirkii Guddiyada Farsamo ee Wadda Hadalada Somaliland iyo Soomaaliya
Arbaco, Juun 17, 2020 (HOL) – Shirkii wada-hadalada Somaliland iyo Soomaaliya ee ka socday Waddanka Jabuuti ayaa caawa labadii dhinac ku kala saxeexdeen waxa loo yaqaan Minutes-ka, kaasi oo ah is afgarad hordhac ah oo labada dhinacba isla qaateen.Sidoo kale waxay sheegeen in laysla qaatay Shan qodob kuwaasi oo loo saaray Saddex guddi hoosaadyada oo ka wada shaqayn doono qodobadaasi, Waxaana ka mida qodabadaa uu Warbaahinta u akhriyey Shirgudoonka Shirka oo ah Wasiirka Arrimaha Dibada ee Jabuuti.
Waxay kala yihiin qodobada.
1. Sidii loo sii wadi lahaa shirarka mustaqbalka si qurux badan oo hadaf xanbaarsan
2. Sidii dib loogu dhisi lahaa Kalsoonidii labada dhinac.
3. Sidii loo meel marin lahaa qodobadii lagu heshiiyey shirarkii hore ee aan la hirgelin sida Kaalmooyinka Dhaqaale ee Caalamiga ah iyo Gargaarada Bani-aadamnimo, waxaana qodobkaasi loo saaray guddi, kuwaasi oo shiridoona muddo shan iyo toban cisho (15) ka dib ah, kuna shiridoona waddanka Jabuuti.
4. Waxaa ay labada dhincba soo saareen guddi ka wada xaajoon doona Arrimaha Hawada, kuwaasi oo muddo shan iyo toban cisho ah ku shiridoona waddanka Jabuuti.
5. Waxaa ay labada dhinacba soo saareen guddi saddexaad oo ka wada shaqayn doona Arrimaha nabad-gelyada.
Dhamman Saddexdaa guddi shan iyo toban cisho ka dib waxay ku kulmi doonaan Jabuuti, waxaana lagu magacaabay guddiyadaasi (Technical sub comment) Guddida guud ee farsamado ee wada-hadalada oo lagu magacaabo (Join Ministerial Comment), waxaanay 45-cisho ka dib ku kulmi doonaan Jabuuti si u qiimeeyaan wax qabadka guddi hoosaadyada.
← Kenya Set to Reopen Border With Somalia
Trump rally highlights vulnerabilities heading into election →
Talaado, Jan 12, 2021-Bam gacmeed caawa lagu tuuray goob diiwaan gelin magaalada Laascaanood
Isniin, Dec 28, 2020-Wasiirka ganacsiga Soomaaliya oo kala diray rugta ganacsiga Soomaaliya
Sabti, Oct 31, 2020-Shirkii Adhicadeeye oo soo gabgaboobey iyo gogol labaad oo la dhigay isla halkaa
October 31, 2020 Abdirisaaq 0